Barcelona Oo Ku Barbaratay Real Sociedad Kadib Markii Ay 5-1 Ugu Awood Sheegatay Garoonka Camp Nou - jornalizem
Barcelona Oo Ku Barbaratay Real Sociedad Kadib Markii Ay 5-1 Ugu Awood Sheegatay Garoonka Camp Nou
Goolal isdabajoog ah oo ay ka dhalisey Barca kooxda Real Sociedad ayaa u horseeday in guul la yaqaan ku bilaabato horyaalka La Ligaha kadib markii ay 5-1 uga badisey ciyaar ka dhacday garoonka Camp Nou.
Carles Puyol iyo Cristian Tello ayaa kamid ahaa raggii uu ku bilaabay garoonka tababare Tito Vilanova, halka ay Real Sociedad ay u xulatay afka hore Antoine Griezman.
Saddex daqiiqo ayay ku qaadatay Barca inay hogaanka qabato kadib markii uu koone uu soo laaday Xavi Hernandez uu madaxa ku dhaliyey Puyol oo dhowaan dhaawac ka soo laabtay.
Hase ahaatee daqiiqad kadib ayaa la sigey goolka Barcelona balse ma sii daahin kooxda martida ahayd ee waxay goolka dhalisey Barca daqiiqadii sagaalaad markaas uu laacibkeeda Gonzalo Castro uu dhaliyey gool qurux badan.
Lionel Messi ayaa sideedii ku soo celiyey ciyaarta kadib markii uu kubbada kala dhex baxay labo daafaca Sociedad ah kadibna goolkii 2aad u dhaliyey kooxdiisa.
Hase yeeshee waxa uu goolkiisii labaad dhaliyey Messi shan daqiiqo kadib markii uu meel cidlo ah ka helay kubbad kana dhigey 3-1.
Pedro ayaa u dhaliyey goolkii afaraad kooxda Barca kadib markii kubbada fiican uu u soo dhigey Tello waxayna qeybtii hore ku soo dhamaatay ciyaarta 4-1.
Hase ahaatee ciyaartii markii ay socotay 70 daqiiqo ayaa tababaraha Barca waxa uu fadhiga ka kiciyey weeraryahankiisa David Villa oo muddo siddeed bilood ah garoomada ugaga maqnaa lug uu ka jabay.
Sacab badan ayaa u dhacay David Villa waxana uu markii uu garoonka soo galay u suurtogashay in goolkii ugu horeeyey uu ka dhaliyo horyaalka hadda bilowday daqiiqadii 83aad kaasoo ahaa baas uu meel fiican uga soo dhex bixiyey Iniesta.
Guushan ayaa waxa ay ka dhigtey in Barca hogaanka horyaalka ay ku qabato saddex dhibcood iyo afar gool oo ay leedahay.
Waxaana guushan ay madax xanuun ku noqotay kooxda Real Madrid oo garoonkeeda barbaro lagula qabtay ciyaar tan ka sii horeysey markii ay kulmeen kooxda Valencia.